Yintoni I-Web Scraping? I-Semalt Expert ichaza
I-Web scraping yinkqubo yokukhipha idatha ngobuninzi ukusuka kwezinye iwebhusayithi. Kufana nophando lwewebhu kunye nedata efunyenweyo ingagcinwa ngokuzenzekelayo kwifayile yekhomputha yendawo. Namhlanje abantu banako ukugcina yonke idatha eqokelelwe kwikhompyutheni yabo ngokuchofoza nje iqhosha. Amashishini amaninzi, kunye nabantu ngabanye, basebenzisa olu hlobo lweendlela ngezizathu ezahlukeneyo, njengoluhlu lwamagama okanye iimveliso. Kodwa kufuneka baqaphele ukuba bangaphinda baphinde baphinde bathengise okanye bathengise kwakhona itekisi efanayo kuba akusiyo isenzo esisemthethweni.
Imizekelo ye-Web Scraping
Namhlanje amaninzi amaninzi azama ukuthola inombolo izinto ezincedo kwi-intanethi. Ngokusebenzisa i-web scraping, umzekelo, umninimzi wokuthengisa unokufumana iinjongo ezixabisekileyo ukuzalisekisa umsebenzi wakhe. Yindlela efanelekileyo kakhulu. Esikhundleni sokuzama ukukopisha yonke idatha, njengoluhlu lwamagama kunye nolwazi lokuqhagamshelana, abaphathi kunye neenkokheli zeqela bangasebenzisa i-robot yokukrabhu yewebhu ukuqokelela yonke idatha abayifunayo kwikhompyutha yabo. Bangakwazi ukuqokelela ii-URL ezithile, ezinokubanceda bafumane ulwazi oluthile..
Iinkampani zezeMali kunye ne-Web Scraping
I-Fintech Industries isebenzise kakhulu i-web scraping, ukufumana yonke ingcaciso efunekayo ayifunayo. Ngokusebenzisa i-web scraping, iziko lezemali lizama ukufumana inzuzo engakumbi ngaphandle kweengozi kwaye indlela yodwa yokwenzayo kukuba ukwazi ngaphezu kwabanye abazama ukwenza okufanayo. Idatha ephezulu inkampani yezemali ibutha, inenzuzo ngakumbi iya kuba. Enye yeendlela eziphambili kakhulu kubantu abashishini abazama ukufumana inzuzo kukubhalisa kwiinkonzo ngeBloomberg, ukuba banokufikelela kuzo zonke iinkcukacha ezisisiseko kwaye babe bhetele kunezokhuphiswano zabo. Oku kungona kutheni amaninzi amashishini amakhulu athembela kwi-web scraping; ba khangela idatha engcono, ukuze benze iimpazamo ezimbalwa kwaye bakwazi ukukhulisa inzuzo yabo.
I-Web Scraping ivumela abantu ukuba benze uphando ngokubanzi
Ukukhutshwa kwewebhu kunokunceda abanye abantu abaninzi, njengabaphandi okanye amaziko, njengeeyunivesithi noorhulumente ukuba benze uphando kunye nokuqokelela yonke idatha efunekayo mfuneko. Ngokomzekelo, ezininzi izazinzulu ziyakwazi ukufumana ulwazi oluchanekileyo lokwenza 'ityala' liphando.
Abantu bangaqalisa njani nge-Web Scraping?
Ukuqokelela idatha eyahlukeneyo kwiziko lewebhu kunokuba ngumsebenzi onzima. Abantu abaqala ukuqala ngewebhu badinga ukusebenzisa i-application ye-web scraping application, njengeDexi.io. Isixhobo esisekelwe kwisiphequluli sinika abasebenzisi bayo ukhetho lokuqokelela yonke idatha abayidingayo ngexesha langempela, kwaye kubanika ithuba lokugcina ulwazi lwabo oluqokele ngqo kwi-Box.net kunye ne-Google drive.
I-Web scraping iyasebenza kakhulu kwaye isilula. Inika abantu ithuba lokukhupha yonke idatha abayidingayo ngaphandle kwexesha.